सशस्त्र द्वन्द्वका कारण के हुन् ? | allans.pl
सशस्त्र द्वन्द्वका कारण के हुन् ?
Views विचार 14 डिसेम्बर 2021 शिक्षा र विज्ञानद्वन्द्वहरू सैन्य संघर्ष कारणहरू युद्ध स्रोतहरू
लुडविक (अतिथि)	 29 नोभेम्बर 20210प्रतिक्रियाहरु
सशस्त्र द्वन्द्वका कारण के हुन् ? सशस्त्र द्वन्द्व किन हुन्छ ? सशस्त्र द्वन्द्वका स्रोतहरू के हुन्? विगतमा युद्ध किन भयो र अहिले किन भड्कियो ?
रुविक प्रश्नको उत्तर दिए 14 डिसेम्बर 2021
लाई जवाफ दिनुहोस्: सशस्त्र द्वन्द्वका कारण के हुन् ?
सशस्त्र द्वन्द्वका कारणहरूमध्ये, हामी छुट्याउन सक्छौं: चासो र लक्ष्यहरूको भिन्नता, आर्थिक कारकहरू (उदाहरणका लागि तेल भण्डारहरूमा पहुँच), राजनीतिक कारकहरू (जस्तै क्षेत्रीय विवाद र जातीय विवाद), वैचारिक कारकहरू (जस्तै धार्मिक विवाद), बाहिरबाट हस्तक्षेप (जस्तै। अर्थात् हतियार र हावी हुने आकांक्षाहरू)। विगतमा पनि यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ ।
कासिया प्रश्नको उत्तर दिए 8 डिसेम्बर 2021
रुविक6.57K	 डिसेम्बर १,, २०१। मा पोष्ट गरिएको	0प्रतिक्रियाहरु
कासियाले सशस्त्र द्वन्द्व कहाँबाट आउँछ भनेर राम्ररी व्याख्या गरे। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ कुनै विशेष भिन्नता छैन यो कसरी कारणहरूको सन्दर्भमा थियो। त्यहाँ सँधै समान कारणहरू छन्: प्रभाव विस्तार, भूमि कब्जा, कच्चा पदार्थ र स्रोतहरू प्राप्त गर्न, विभिन्न उद्देश्यका लागि मानिसहरू प्राप्त गर्ने - काम मात्र होइन, मनोरञ्जन, धार्मिक उद्देश्य, वा कुनै समुदायप्रति पूर्वाग्रहसँग सम्बन्धित उद्देश्यहरू, अवसरमा। युद्धको पनि तिनीहरूले प्राविधिक, सैन्य वा चिकित्सा प्रगति निम्त्याउँछन्।
समान प्रविष्टिहरू हेर्नुहोस् सशस्त्र द्वन्द्वका कारण के हुन् ?
भात खान के गर्ने? खाजा वा बेलुकाको खानाको बारेमा?
घरको सर्वश्रेष्ठ तापमान के हो? के सेट गर्ने?
जीवनमा समाप्त हुने शब्दहरू, "Życie" मा समाप्त हुने शब्दहरू
हंगेरीमा फर्वार्डरले कति कमाउँछ? हंगेरी मा shippers को कमाई
इ England्ल्याण्डको शरद inतुमा समुद्री किनारमा जाने कहाँ?
डिप्रेसनको लागि कुन औषधीहरू राम्रो र सुरक्षित छन्?
अस्ट्रेलियामा फ्रेट फर्वार्डरले कति कमाउँछ? अष्ट्रेलिया मा shippers को कमाई
धागा हो सशस्त्र द्वन्द्वका कारण के हुन् ? के यसले तपाइँ, तपाइँको कम्पनी, प्रजनन, उत्पादन वा तपाइँको कुनै अन्य प्रयासलाई चिन्ता गर्दछ?
535911000 535१ ०००१ 911११ (000 XNUMX१ ००१ XNUMX११) - यो नम्बर कसको हो?
लिथुआनियामा कम्प्युटर ग्राफिक डिजाइनरले कति कमाउँछन्?